Younis shines for Pakistan again in Harare | Cricbuzz.com
Younis shines for Pakistan again in Harare
Cricbuzz Staff in Harare • Last updated on Wed, 11 Sep, 2013, 03:52 PM
Pakistan players celebrate a Zimbabwe wicket at the Harare Sports Club on Wednesday. Pakistan endured a frustrating morning as it took them more than an hour and one ball short of 20 overs to capture the last two Zimbabwe wickets after the home side resumed at 235 for eight. © Cricbuzz
Khurram Manzoor makes a run for Pakistan against Zimbabwe at the Harare Sports Club on Wednesday. Manzoor made a patient half-century as Pakistan reached 95 for two at tea in reply to Zimbabwe's first innings total of 294 on the second day of the second Test against Pakistan on Tuesday. © Cricbuzz
Younis Khan faces a delivery against Zimbabwe at the Harare Sports Club on Wednesday. Younis Khan carried on from where he left off in the first Test as he played another solid innings for Pakistan on the second day of the second Test against Zimbabwe at Harare Sports Club on Wednesday. © Cricbuzz
Younis Khan carried on from where he left off in the first Test as he played another solid innings for Pakistan on the second day of the second Test against Zimbabwe at Harare Sports Club on Wednesday.